Laacib caan ah oo xaaskiisa wakiil ka dhigtay! – Gool FM
Laacib caan ah oo xaaskiisa wakiil ka dhigtay!
Raage June 16, 2016
(Milano) 16 Juunyo 2016 – Laacibka reer Argentina ee u safta kooxda Inter ee Mauro Icardi ayaa waxaa wakiil u ah isla xaaskiisa Wanda, iyadoo weliba sharraxaysa sida ay qandaraas cusub ugusoo hooysey waxay tiri.
“Metelitaanka qof Mauro oo kale ah waa sahal,” ayay Wanda Icardi u sheegtay Hola.
“Naadiyada ugu wanaagsan baa u baahi qaba, kulankii ugu horreeyay ee aan Inter la yeesho, waxaan sicirkiisa kordhiyey 5 jeer.” ayay ku faantey.
“Waxaan xusuustaa inay noo taagnayd dayuurad khaas ah, haddii ay Inter wada xaajoodka diidi lahayd wuxuu markiiba aadi lahaa Madrid ama Paris, balse Roberto Mancini ayaa codsi sameeyay markiibana arrinta waa la xalliyey. Waxaan watey xisaabiyeheeyga laacibiinta Inter-na waxay moodayeen inaan waalanahay.” ayay ku falax gooddisey.
Laacibkan reer Argentina ayaa sanadkii tegey heshiis cusub la gaarey kooxda Nerazzurri kaasoo San Siro ku haynaya tan iyo 2019.
GOOGOOSKA: England vs Wales 2-1 (Ingiriiska oo aakhirkii adkaaday)
GOOGOOSKA: Germany vs Poland 0-0 (Jarmanka oo la joojiyey)